मलेसियाबाट फर्केका युवा भैंसीपालनमा रमाउदै, मासिक चार लाख आम्दानी, भन्छन अब म मलेसिया किन जानु ! - ramechhapkhabar.com
मलेसियाबाट फर्केका युवा भैंसीपालनमा रमाउदै, मासिक चार लाख आम्दानी, भन्छन अब म मलेसिया किन जानु !
दुई वर्षअघि मलेसियाबाट फर्केका सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-४ का तीन युवाले सुरू गरेको भैंसीपालन व्यवसाय अहिले जिल्ला मै उदाहरणीय बनेको छ । यो व्यवसायबाट उनीहरूले मनग्य आम्दानी मात्रै गरीरहेका छैनन् जिल्लाका युवाहरूको आइडल पनि बनेका छन् ।
कुमार सापकोटा, माधवराज सापकोटा, टोपनाथ सापकोटाले सुरू गरेको भैंसी पालनबाट आकर्षित भएर साँगाचोकगढीका अरू युवा पनि अहिले भैंसीपालन गर्न थालेका छन् ।
उनीहरूले करिब ५५ लाख रूपैयाँमा सुरू गरेको भैंसीपालनबाट अहिले माहिनामै साढे ४ लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । सिन्धु-कुभिण्डे कृषि फर्म खडा गरेर उनीहरूले ११ वटा भैंसीबाट व्यवसाय सुरू गरेको बताए । अहिले २१ वटा भैंसी र १७ वटा पाडापाडी रहेको फर्म सञ्चालक कुमार सापकोटाले बताए ।
‘अहिले व्यवसायिक रूपमा भैंसीपालन सुरू गरेपछि उत्पादित दूधको माग बढिरहेको छ तर भैंसीलाई दिने घाँस, दानाको महंगी बढेअनुसार दूधको भाउ नहुँदा दुःख लाग्छ, मल धेरै हुने भएकाले भैंसी पालनसँगै थोरै मात्रामा तरकारी पनि लगाएका छौं ।’ दूध प्रतिलिटर सय रूपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए ।
फर्ममा ६ जनाले रोजगारी समेत पाएका छन् । उनीहरूले भैंसीलाई आवश्यक हेरचाह गर्नुका साथै दूध दुहुनेलगायतका काम गर्दै आएका छन् । दैनिक १२० देखि १२५ लिटर दूध उत्पादन गरिरहेका उनीहरूले हरेक दिन बिहानै चौतारा बजार पु¥याएर बेच्ने गरेका छन् । अर्का सञ्चालक मधवराजले यस व्यवसायबाट आत्मसन्तुष्टि मिलेको बताए । परिवारसँग बसेर काम गर्दा सहज र खुसी मिल्ने उनको भनाइ छ ।
कुमार सापकोटा र माधवराज सापकोटा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका हुन् । टोपनाथ भने गाउँमै परम्परागत शैलीमा कृषि कर्म गर्दै आएका थिए । तीन युवाले सञ्चालन गरेको फर्म यो क्षेत्रकै उदाहरणीय बनेको छ। विदेशमा गर्ने दुःख नेपालमै गर्ने सके मनग्य आम्दानी गर्न सकिने उनीहरूको अनुभव छ।